Ogaden News Agency (ONA) – 17ka Nov. Waa Maalinta Caalamiga ee Ardayda (International Students day)
Posted by ONA Admin	/ November 17, 2014
Waxaa maanta ay ardayda caalamka xusayaan maalintan loogu yeedho International Students Day. Maalintan loo aqoonsaday inay noqoto maalinta caalamiga ah ee la xuso ardayda ayaa loogu talagalay in lagu xasuusto 17kii Nov. 1939kii maalintaa oo ciidamadii Nazi-ga ay galeen Jaamacadda Prague ee dalka Jikoslafakiya (Czechoslovakia) say u joojiyaan banaabax lagaga soo hojeeday oo ardayda jaamacadda ay dhigahayeen. Waxay halkii ku toogteen Sagaal horjoogayaashii ardayda ahaa iyagoo 1200 arday ahna u taxaabay xeryaha ciqaabta.
Waxaa markii ugu horeysay loo aqoonsaday inay maalinta noqoto maalin ardayda ay xusaan shir 1941kii ay magaalada London ku qabsadeen Golaha Ardayda Caalamka (International Students’ Council), halkaasoo ay ku sugnaayeen arday badan oo qaxooti ah oo kasoo carartay dagaalkii labaad ee caalamka ka socday.
Hadaan hordhacaa yarka kaga tagno sababta loo doortay 17ka Nov. inay noqoto maalinta xusuusta ardayda, waxaa muruga leh xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarada Ogadenya ku nool oo haba yaraatee aanan haysanin wax lagu tilmaami karo waxbarasho.
Waxaa laga dhisay meela kala duwan oo dalka ka mid ah guryo lagu tilmaamay inay yihiin dugsiyo wax lagu barto hasa ahaatee waxaa lala socdaa in dhamaantood ay noqdeen xeryo ay galaan ciidanka Itobiya iyo hawaarinta dhufayska u ah. Waxaa intaa dheer ardayda magaalada sida Jigjiga, Dhagaxbuur, Qabridahare, Godey iyo kuwa kaleba oo lagu amray inay waardiye ka noqdaan jidadka iyo xaafadaha oo sidaa lagu siiyo darajada waxbarashada ugu dambaynta ku qaata shahaado aanay Itobiya ictraafsanayn oo aanay jaamacadaha Itobiya aan lgu gali karin.
Waxaa loo baahan yahay in ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya ay caalamka gaadhsiiyaan dhibaatada lagu hayo ardayda Ogadenya iyo dhalinyarada da’yarta ah ee gumaysiga Itobiya uu ku qasbo inay horsocdaan goobaha dagaalka say dhufays ugu noqdaan.
Waxaan maalintan la xusayo Ardayda Caalamka aan halkan uga diraynaa hambalyo dhamaan ardayda S.Ogadenya ee daafaha caalamka wax ku barta, waxaanan leenahay wax-barashada ku dadaala hana iloobina dalkiinii iyo dadkiinii.